Ndị na-emepụta sistemu ihe mgbochi - Ndị na-eweta sistemu ihe mgbochi China & ụlọ ọrụ
4 na 1 Sistemu
Ọkọlọtọ akpa akpa & akara
Mpempe ọkọlọtọ igwe kwụ otu ebe
Usoro mgbochi cafe anyị dị mma maka ịwepụ mpaghara patio na mpụga azụmahịa gị! Enwere ike ibipụta akara ngosi nke gị n'akụkụ abụọ nke ọkọlọtọ, na-enyere aka ịmepụta mmata na nweta mmasị nke ndị na-agafe agafe. Isi nwere oghere ise na-enye gị ohere ịkọwa oke na ebe ị ga-anọ na-agbanwe agbanwe.
Enwere ike iji ọkọlọtọ nwere akụkụ abụọ ma ọ bụ otu akụkụ kpuchie ihe mgbochi cafe nke na-adọrọ mmasị n'ezie ma hụ na ogige gị pụrụ iche na asọmpi ahụ ma na-enyekwa ndị ahịa gị nchebe ikuku. ọkọlọtọ nwere ike mfe dochie.
BS1000, usoro nhazi nke onwe ya gụnyere tubes na ọtụtụ njikọ. A na-arụpụta njikọ site n'ịkpụzi injection ma mee ya site na plastik nkwado iko-fiber nwere ezigbo ike. Tubes nwere ike ịbụ aluminom ma ọ bụ eriri mejupụtara na akụkụ nke ọ bụla n'ogologo 1m naanị.
Standard agba nke nkwonkwo bụ nwa; na arịrịọ enwere ike ịmepụta nkwonkwo na agba ndị ọzọ.
Nye iwu tubes na nkwonkwo na-agbanwe agbanwe dịka ngwa ahịa gị ma ọ bụ ngwa gị siri dị.